IStudiyo Sokuqasha eBirmingham, West Midlands
Real Estate Listings: » Residential homes » Studios » GB » West Midlands » Birmingham » Birmingham City Centre » IStudiyo Sokuqasha eBirmingham, West Midlands1
United Kingdom, West Midlands, Birmingham, Birmingham City Centre, B1 1pw
Ukuvuselelwa kokugcina 2021-03-19
Ikhodi Yokuposa: B1 1pw
Izici: Available 28th April 2021, Studio/City Pad, Furnished Throughout, EPC Rating C, City Centre Location, Close Public Transport Links
Le ndlu efulethwe kahle yesitudiyo / yedolobha eChurchgate Plaza iyatholakala ukuqasha kusuka ngomhla ka-28 Ephreli. Itholakala ngemuva kwe-Mailbox futhi ibanga lokuhamba kalula leBrindley Place, isiteshi sesitimela saseNew Street kanye ne-The Bullring, intuthuko ibekwe kahle ngokwedlulele yokuhlala kweDolobha. indawo yokuhlala evulekile enekhishi elifanele eligcina izinto zokusebenza ezihlanganisiwe, indawo yokuphumula / indawo yokudlela enebhalkhoni eligcwele eligcwele, indawo yokulala ehlukile enewadrobe efanelekile kanye nendawo yokugezela enokuhamba okugeza. Impahla ibuye izuze ohlelweni lwe-intercom. Ngeminye imininingwane noma ukuhlela ukubuka kwakho, xhumana noCentrick namuhla!
Ibhaliswe ku 15. May 2019
Ibhaliswe ku May 15, 2019
, B1 1pw
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), M1 6dn
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B17 9rp
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), Tr14 0hq
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B3 2bb
595 Pound £ / Njalo ngenyanga
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B4 6at
550 Pound £ / Njalo ngenyanga
&nbspBirmingham in West Midlands (United Kingdom), B5 6nu
Izikole eziseduzane B1 1pw